Mayelana NATHI - Shanghai Yubing Equipment Co., Ltd.
Singumkhiqizi oholayo wemishini yokupholisa esezingeni eliphakeme (ehlanganisa ama-coolers avulekile navalwe-amasekethe, ama-condensers evaporative kanye nama-air coolers) nemishini yokwelashwa efanelekile (ukwelashwa kwamanzi i-RO, i-Filtration ne-Ultra-filtration, ukuthambisa Amanzi, i-Chemical Dosing System ne-MBR Waste -water Treatment system) enolwazi neminyaka ecishe ibe ngu-20.
Sekungamashumi eminyaka, sihlinzeke ngemishini esezingeni eliphakeme nensizakalo kumakhasimende ethu futhi besingumlingani owaziwayo ezimbonini eziningi kufaka phakathi amandla, uwoyela negesi, imboni esindayo, imboni ye-petrochemical, izitshalo zamandla, izindawo zokuhluza i-petroleum, uginindela & izigayo zamaphepha, izimboni zensimbi, izicelo zezimayini, imboni yokudla nemishini eyenziwe ngezifiso yezindawo zomphakathi ezifana nokwakhiwa kwamahhovisi, isiteshi sesitimela.
Ngesikhathi sokubambisana namakhasimende asenkampanini yezimboni, sanikezwa igunya lokuhlinzeka ngemishini efanele yokwelashwa kwamanzi ehlanganisa ukucaciswa kwamanzi okuvela enqubeni yokuphinda isetshenziswe amanzi angcolile. Okuhlangenwe nakho okungajwayelekile nobuchwepheshe obujulile kusenze saba ngongoti kulo mkhakha.
Ithimba lethu lobunjiniyela lingongoti bokupholisa ukwakhiwa kombhoshongo ukuze kukhuliswe ukusebenza kahle ngenkathi kuqinisekiswa ukuhambisana nezimvume zokusebenza ezifanele futhi inkampani yethu iguquguqukayo ukuvumelanisa kalula nemigomo nemibandela yamakhasimende ethu ngenkathi igxile kuzidingo zamakhasimende jikelele njengokuhlelwa kwesiza, amanzi & ikhwalithi yomoya, izindleko ezihloliwe, ukusebenza okulula nobuqotho besikhathi eside nobungcweti embonini.
Ithimba elinamandla le-ICE libheke phambili ekwenzeni impumelelo eqhubekayo yokusebenzisana namakhasimende ethu emhlabeni jikelele.
Nikeza ngemikhiqizo nezinsizakalo ezikhiqizayo, ezonga imali nezingahlala isikhathi eside ngokuhambisana nazo
izidingo nokulindelwe kwamakhasimende ethu.
- UMBONO WETHU--
Imibhoshongo yethu yokupholisa yenzelwe ukuthi ibe nokusimama futhi
ube nomthelela ophansi kwezemvelo.
- UMGOMO WETHU -
Isazi esinolwazi + Imishini yokucubungula okuthuthukile + Abasebenzi abangochwepheshe ngaphansi kwekhodi yokusebenza ekhishiwe
yi-Quality Management System = 100% umkhiqizo wokwaneliseka
- UKUBALULEKA KWETHU -
Indawo yokukhiqiza ye-ICE etholakala eSifundazweni saseShandong enezinzuzo ezikhungweni ezihlome kahle, abasebenzi abenele nabasebenza izinsiza zomhlaba, kanye nenqubomgomo yendawo esekelayo yokwenziwa kwamasu amasha nokwenza ngcono ubuchwepheshe.
Ukukhiqizwa okuncike kusetshenziswa esikhungweni sethu sokukhiqiza ukuqinisekisa imikhiqizo esezingeni eliphakeme enezici zokuncintisana, okwamanje, inikeza ukuguquguquka ngokwesikhathi sokuhola namandla wokukhiqiza, ikakhulukazi kuphrojekthi eyenziwe ngezifiso.